Chii chinonzi Rapid Application Development? 5 Zvikonzero Zvekushandisa RAD - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kuvandudza kwesimba, Product development, Technology Kubvunza, Vashandi veTekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Rapid Chikumbiro Kuvandudza (RAD) ari Software nzira yekuvandudza iyo inotarisa nekukurumidza prototyping uye kuvandudza kwesarudzo kuti uone kukurumidza kugadzirwa kwechigadzirwa. Kusiyana neyakajairika mapopoma ekuvandudza, RAD inotarisa pane iterative yekuvandudza maitiro aka Agile development. Pfungwa yeRAD yakagadzirwa kubva mukushungurudzika kubva kune nzira dzekare izvo zvakakonzera kunonoka mukati kuvandudza kwesarudzo. Izwi iri rakatanga kugadzirwa naJames Martin uyo pamwe nevamwe vake vakagadzira nzira nyowani yekusimudzira kureva Rapid Iterative Production Prototyping (RIPP). Muna 1991, nzira iyi yakava musana webhuku Rapid Application Development.
Zvikamu zveKukurumidza Kushanda Kwekuvandudza:
1. Bhizinesi Modelling:
Musimboti bhizimisi mienzaniso inosarudzwa uye kukosha kwavo kwekubudirira kunotarirwa. Rudzi uye kuyerera kweruzivo kunosarudzwa pakati pezvakasiyana bhizimisi mienzaniso. Ndeupi ruzivo ruchadikanwa kusarudza rudzi rwe data zvimiro uye sei kutaurirana mabhiriji pakati akasiyana bhizimisi masevhisi anotangwa anotemerwa panguva iyi.
Chikamu chinotevera chinosanganisira kuongorora uye kuongororwa kwezvinhu zve data zvine chekuita ne bhizimisi model. Hunhu hwema data seti anotsanangurwa uye kukosha kwawo kune bhizimisi yakanyatsorongwa.
Iyo data seti uye bhizimisi mamodheru anowirirana kugadzira kuyerera kweruzivo rwemhando dzakasiyana. Maitiro ekuvandudza uye shanduko ese ari maviri anotsanangurwa. Mune ino nhanho, maitiro ekuwedzera, kudzima, kugadzirisa kana kudzoreredza data seti anoiswa munzvimbo.
4. Kuedza & Kunze:
Icho chikonzero chaicho chekuzivikanwa kweRAD ndechekuti chinotarisa zvakanyanya pakuyedza nekutora. Imwe neimwe prototype inoedzwa nemushandisi uye mhinduro inounganidzwa. Iyi mhinduro inoshandiswa kugadzirisa chimiro chiripo cheprojekti uye kugadzirisa shanduko zvinoenderana nekubatana kwevashandisi neiyo prototype. Maitiro ekuyedza akaiswa kune yega yega prototype inotungamira kune mashoma mabugs mune yekupedzisira kunyorera.
Unofanira kuverenga: Nhungamiro Yakazara Yemamaro Ekumutsidzira Mari yeMafoni Mapurogiramu
5 Makomborero eKukurumidza Kushanda Kwekuvandudza:
1. kukurumidza Kununura:
Sezvo purojekiti yese yakakamurwa kuita mamodule uye moduru yega yega inobatwa seyakasiyana prototype iyo nguva yakashandiswa mukuunza yakadzikira zvakanyanya. Imwe neimwe prototype inopinda yakaparadzana nhanho yekuyedza uye zvese zvikamu zvinozopedzwa pamwe chete kugadzira yekupedzisira application. Izvi zvinoita kuti kukurumidza kutumirwa kweiyo Software netupukanana tudiki.
2. Yekukurumidza Musika Kuongorora:
Sezvo prototype yega yega inogona kuyedzwa nemushandisi wayo wekupedzisira zvinova nyore kuongorora tarisiro yemazano nekuvandudzwa. Chero shanduko iri nyore kuisa sezvo ichizokanganisa imwe modhi yekushandisa uye kwete iyo yese budiriro mune imwe nzira.
3. Mushandisi Mhinduro:
Mukusimudzira kwetsika yemvura, kuvandudza kweApp kunonoka kunogona kukonzera kunonoka kusvika kwechigadzirwa. Pfungwa yacho inogona kushaya basa kana kubiwa nevanokwikwidza. Nekushandisa iyo MVP uzivi yekusimudzira kudiwa uye psychology yemushandisi inoongororwa uye kumwezve kukura kunoitwa chete kana musika unoratidzika kunge wakakodzera.
4. Kureruka kuisa shanduko:
Zvinhu zvinoverengeka zvekushandisa zvinoitwa panguva imwe chete. Sezvo pasina maitiro maitiro ekutungamira, shanduko yekushandisa iri nyore kuisa. Kusiyana nekusimudzirwa kwemapopoma, iyo Developers haufanire kutora nhanho yekumashure kana shanduko dzakakurudzirwa muchigadzirwa.
5. Kubatanidzwa kweSystem:
Ese mamodule ekushandisa akabatanidzwa kubva pakutanga chaiko zvichitungamira kuzvinhu zvidiki mune yekupedzisira yekubatanidza maitiro. Izvi zvinotungamira kumabhugi mashoma nekuti ese ma module akanyatsoenderana kubva pakutanga chaipo.
Rini yekushandisa Rapid Chikumbiro Kuvandudza?
Kukurumidza kunyorera kunoda hunyanzvi hwakanyanya Developers, yakawanda bhajeti uye inogona chete kuitiswa pane makuru mapurojekiti ayo anogona kukamurwa kuita ma module. Zvakare, hazvikurudzirwe kushandisa uyu muitiro kana zvichinetsa kuunganidza mhinduro dzevashandisi nekuti iyo poindi yese yekukurumidza kuvandudza kwesarudzo kutora mhinduro dzemushandisi uye kuendesa mberi mberi zvichiteerana.
Kana iwe uchitsvaga mumwe munhu kuti akure Mobile Apps enyu bhizimisi kupfuura iwe uri panzvimbo chaiyo. Isu tiri NewGenApps vane makore gumi nemapfumbamwe pamwe neruzivo mukuvandudza mafomu ayo anonanga akananga kuchikamu chavo chakanangwa.